Store Feeling, Author at Store Feeling - Page 11 of 23
ဘယ်လောက် လှတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင် အတူတူပဲ…
Posted on August 3, 2020 by Store Feeling
ဘယ်လောက် လှတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင် အတူတူပဲ ။ လှလှ မလှလှ.. ရုပ်ဆိုးဆိုး မဆိုးဆိုး ချီးမထွက်ရင်… တော်ပြီ..။ ကိုယ်ဒွေ အတွက်တော့ ချီးမထွက်တဲ့ မိန်းမ က ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျ။ ခလေး မထွက်ခင်.. ချီး အရင် ထွက်တတ်တာကိုး..၊ မိန်းမ အများစု (တချို့မပါ )တူညီတဲ့…
ကိုယ့်ဘာသာ အေးဆေးမနေဘဲ ဟန်ငြိမ်းဦးကိုသွားဆွမိတဲ့အခါ
ပြစမ်းပါအုံးကျနော်ဖော်ကောင်လုပ်လို့ ဘဝပျက်သွားတဲ့မိသားစုတွေအတွဲတွေရှိရင်..၊ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်တောင်ချစ်သူမရှိသေးပါဘူးဆိုပီး ပရိတ်သတ်ကိုညာထားပြီး..။ ကောင်မလေးတယောက်ကို လူမသိသူမသိတွဲ ဟော်တည်မှာခေါ်အိပ်လိုက် ခရီးတွေတူတူထွက်လိုက်နဲ့..၊ တကယ်ရိုးသားရင်တကယ်ချစ်ရင် ပရိတ်သတ်ကိုချပြလေ..၊ ဘယ်ချပြမလည်း ခင်ဗျားတို့ကဒီတယောက်နဲ့ပြတ်သွားလည်း အေးဆေးပဲလေ..၊ ဘယ်သူမှမသိလိုက်တော့ နောက်တယောက်ကို အေးဆေးပြောင်းစားယုံပဲ..၊ ဖော်ကောင်မလုပ်စေချင်ရင်ကိုယ်တိုင်က မှန်ကန်အောင်နေ..၊ အနုပညာရှင်ဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေရမှာ..၊ “အေး ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေ ကိုရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက မထိန်းဘူး..။ ကျူပ်တယောက်ထဲထိန်းသွားမယ်” မူရင်း ဟန်ငြိမ်းဦး Unicode ပွစမျးပါအုံးကနြျောဖျောကောငျလုပျလို့ ဘဝပကျြသှားတဲ့မိသားစုတှအေတှဲတှရှေိရငျ..၊ ခငျဗြားကိုယျတိုငျတောငျခဈြသူမရှိသေးပါဘူးဆိုပီး…
ဓမ္မစကြာ အသင်းခေါင်းဆောင်အိမ်မှဘုရားလာဖူးတဲ့ လိမ္မာလွန်းတဲ့ ဘုရားမြွေ(ရုပ်သံ….)
ဓမ္မစကြာ အသင်းခေါင်းဆောင်အိမ်မှာ ဘုရား‌မြွေ ရောက်ရှိ ဘုရားလာဖူးတာလို့ယူဆရပါတယ် လူကိုဒုက္ခမပေးပါဘူး ဘုရားဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတာပါ။ ကံအရမ်းထူးပါတယ် အများကုသိုလ်ရအောာင်ရှယ်ပေးကြပါအုံး Unicode ဓမ်မစကွာ အသငျးခေါငျးဆောငျအိမျမှာ ဘုရား‌မွှေ ရောကျရှိ ဘုရားလာဖူးတာလို့ယူဆရပါတယျ လူကိုဒုက်ခမပေးပါဘူး ဘုရားဘကျကိုမကျြနှာမူပွီးတော့ ငွိမျငွိမျလေးနနေတောပါ။ ကံအရမျးထူးပါတယျ အမြားကုသိုလျရအောာငျရှယျပေးကွပါအုံး
တစ်ရက် ၇၀၀၀ မှ မရရင်ရိုက် နှက်တဲ့ သီလရှင်မလေးရဲ့ မိခင်…….
မနေ့ညက အိတ်ရေးပျက်ခံပြီး ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက် ဂုဏ်သိက္ခာမကျအောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြရှင်းပေးကြသော အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့် နယ်မြေမှုးများ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ မီးသက်တပ်ဖွဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရဲ့ စည်းလုးံညီညွှတ်စွာနဲ့ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ချက်လေးတွေကိုတော့ လေးစားမိတယ်ဗျာ အကြောင်းကဒီလိုပါ ပုံပါ ၇ နှစ်အရွယ် သီလရှင်ဆရာလေးကို ကျောင်းမထား စာမသင်ပဲ ဘာသာသာသနာညှိုးနွမ်းအောင်ပြုလုပ်ပြီး အလှုခံခိုင်းစားနေတဲ့ တာဝန်မဲ့အမေတယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ဖေါ်ထုပ်တားဆီးနိုင်ခဲ့လိုက်သောဖြစ်ရပ်တခုပါ။ သူတို့နေထိုင်တာက ပညာရေးတောင်ဘက် တက္ကသိုလ်တံတိုင်းဘေး ချောင်းနုတ်ခမ်းပေါ် ကျုးကျော်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တာ ၃ နှစ်ကျော်ခန့်ရှိပြီလို့…
အကယ်ဒမီများရှင် မေသန်းနုကတော့ အနုပညာလောကမှာ တချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့သလို ယခုထက်တိုင်လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ဆက်လက်ရရှိနေတဲ့ မင်းသမီးကြီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ် ၂၀၂၀ နှစ်စပိုင်းမှာတော့ မေသန်းနုဟာငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကျခံခဲ့ရကာ ယခုအခါမှာတော့ ချုပ်ရက်စေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။ မေသန်းနုဟာ ထောင်ဒဏ်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးကတည်းက သားဖြစ်သူ မင်းသန့််မောင်မောင်နဲ့အတူ ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး တရားဘောင်အတွင်းသို့ သီလရှင်အဖြစ်နဲ့ ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ မေသန်းနုက သူမအနေနဲ့ တသက်လုံး သာသနာ့ဘောင်ဝတ်ပြီး…
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး စီးချင်စဖွယ် ရထားလေးနဲ့ ခရီးသွားချင်သူများအတွက် အချိန်/ဈေးနှုန်းနဲ့ နေရာတွေတင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (ရန်ကုန် မှ မန္တလေး)မနက်အမြန်ရထား နံနက်6:00 AMရိုးရိုးတန်း – 4650ကျပ် အထက်တန်း – 9300ကျပ်လေအိတ်ရထား ညနေ 3:00 PMရိုးရိုးတန်း – 4650ကျပ်အထက်တန်း – 9300ကျပ်ည အမြန်ရထား ညနေ 5:00 PMရိုးရိုးတန်း – 4650ကျပ်အထက်တန်း –…
ယနေ့ ခေတ်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပွင့်လင်းလာပါပြီ။ လူအချင်းချင်း ခွဲခြားခံရတယ်ဆိုတာ မရှိတော့ သလောက်ဖြစ်နေပေမယ့် အိန္ဒိယမှာတော့ ဇာတ်နိမ့် ဇာတ်မြင့် ခွဲခြားမှုတွေဟာ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ Maharashtra ပြည်နယ်ရဲ့ အနောက်ပိုင်းက Kalembeshwar ဆိုတဲ့ ရွာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ဇနီးဖြစ်သူဟာ အဲဒီနေ့က အများသုံးရေတွင်းမှာ ရေသွားခပ်တဲ့ အခါမှာ ဇာတ်နိမ့်တွေ မခပ်ရ ဆိုပြီး လူအများက နှင်ထုတ် ခဲ့တာပါ။ ဒါကို…
ရတနာပုံသီချင်းဖြင့် စောင်းအစွမ်းပြ တီးခတ်သီ ဆိုနိုင်သူ ပါရမီရှင် ကလေးငယ် (၂) ဦး(ရုပ်သံ) “ဇမ္ဗူလက်ျာတောင်ကျွန်း… ဆုသွန်းမယ်အဖုံဖုံ… ဘေးဘယာအစုံ… ဝေးကြအ ကုန်….. ဇမ္ဗူလက်ျာတောင်ကျွန်း… ဆုသွန်းမယ်အဖုံဖုံ… ဘေးဘယာအစုံ… ဝေးကြအ ကုန်” ဒါကတော့ မြန်မာ့ ဂန္ထဝင်ဂီတပညာရှင် အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေပြည်အေးရဲ့ နာမည် ကြီး သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ရတနာပုံ”သီချင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သိန်းတန်အပါအဝင်..၊ အဆို တော်ပေါင်းများစွာက ပြန်လည်သီဆိုခဲ့ကြပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်…
မနက်ဖြန် ၃ရက်နေ့ ၄ရက်နေ့တွေမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး အခြားပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ မိုးကြီးနိုင်…
ထီးနဲ့မိုးကာဆောင်ကြပါ ၂၀၂၀ ဩဂု​တ်လ ၃ရက်နေ့ ၄ရက်နေ့များတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် Andaman sea ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တို့တွင် မုတ်သုန်လေအားအလွန်ကောင်းနိုင်ပြီး …. Monsoon trough မုတ်သုန်လေဖိအားနည်းမြှောင်တန်းကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း တောင်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေအပေါ်တည်ရှိနေပါတယ် …. ၃ရက်နေ့ ၄ရက်နေ့တွေမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် …. ၄ရက်နေ့နဲ့ ၅ရက်နေ့မှာ ဧရာဝတီကမ်းရိုးတန်း ချောင်းသာ…
အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့မြန်မာပြည်မှ တစ်ချို့သော မိန်းကလေး များ အကြောင်း သိပြီးပြီလား
Posted on August 2, 2020 by Store Feeling
မြန်မာနိူင်ငံဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှူ့အရာမှာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုထားရတာ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ မြန်မာ့အိနြေ္ဒ..၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ဟန်ပန်တွေက မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများကြောင့် ပျက်ဆီးခဲ့ရတယ်(မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့နဲ့အညီနေထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးအချို့တော့ရှိပါတယ်) ဟိုးအရင်တုန်းက ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ မြန်မာမင်းသမီးကို ငှါးတဲ့အခါ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးမှာမြန်မာဝတ်စုံပဲဝတ်ပြသွားပီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကျက်သရေကို..၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချပြသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေ ဒါတွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ကိုထိန်းသိမ်းပြသွားတာတွေ..၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့….Facebook မှာ like တစ်ခု ရဖို့အရေး…..ရှိသမျှပစ္စည်းတွေ အကုန်ဖော်ပြနေကြတဲ့..၊ မြန်မာမိန်းကလေး တွေများလာတယ်……သူတို့ပိုစ့်တွေရဲ့ comment တွေကြည့်လိုက်ရင် အယုတ္တအနတ္တစုံလင်နေအောင်ဆဲဆိုနေကြတဲ့အဆဲ…